प्रचण्डसहितका नेतालाई प्रधानमन्त्रीको प्रतिप्रश्न- नक्सा छापिएपछि देखिएको परिस्थितिबारे बोल्दा कसरी पार्टीको प्रतिष्ठा गिर्‍यो?
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो अभिव्यक्तिले पार्टी र राष्ट्रको प्रतिष्ठामा कुनै आँच नआएको प्रस्ट पारेका छन्।
बालुवाटारमा जारी नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहितका नेताहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफमा उनले उक्त भनाइ राखेका हुन्।
उनले नक्सा छापिएपछि देखिएको परिस्थितिका बारेमा आफूले बोल्दा कसरी पार्टी र देशको प्रतिष्ठा गिर्‍यो? भनी नेताहरूलाई प्रतिप्रश्न गरेका छन्। यसअघि कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले ओलीमाथि पार्टीको प्रतिष्ठा गिराएको आरोप लगाएका थिए।
‘‘नक्सा छापिएको विषयपछि देखिएको परिस्थितिका बारेमा मैले बोलेको हुँ, त्यो विषयलाई स्पष्ट गरेको हुँ,’’ ओलीले भने, ‘‘हामीले गरेको कामको बारेमा राखेको धारणाले कसरी देश र पार्टीको अपमान भयो? तपाईंहरूले के बुझ्न थाल्नुभएको हो?’’
उनले दिल्लीका मिडियामा आएका कुरा र बैठकमा नेताहरूले राखेको कुरा हुबहु आएको भन्दै आश्चर्य प्रकट गरे।
आजको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विषयलाई लिएर नेताहरूबीच भएको सवालजवाफका कारण कार्यसूचीको विषयले प्रवेश नै पाएनन्।
प्रकाशित: मंगलबार, असार १६, २०७७ १०:४३
ओलीले आफ्नो अभिव्यक्तिले पार्टी र राष्ट्रको प्रतिष्ठामा कुनै आँच नआएको प्रस्ट पारे
उनले दिल्लीका मिडियामा आएका कुरा र बैठकमा नेताहरूले राखेको कुरा हुबहु आएको भन्दै आश्चर्य प्रकट गरे